Skype 7.0 wuxuu isku xirayaa interface cusub oo loogu talagalay kiniiniyada | Androidsis
Skype 7.0 wuxuu kudarsamayaa kumbuyuutar iskuxir cusub oo farabadan
Bishii Sebtember ee sanadkii hore Microsoft qaabeynta skype labadaba noocyada iOS iyo Android. Dayactir isla waqtigaas la mid ah kan maanta ka jira agagaarka labadan nidaam iyo doorbidooda luuqad gaar ah oo naqshad gaar ah leh oo muuqaallo muuqaal ah oo aad u soo jiidasho leh leh.
Hadda waa markii Microsoft ay rabtay inay cusboonaysiiso nooca Android ee Skype leeyihiin isku interface oo lagu arki karo macruufka on iPad ah. Guddi cusub oo fara badan oo kuu oggolaanaya inaad si buuxda uga faa'iideysato kiniinka Android-ka ah ee aad haysato oo aad ku samayn karto dhowr waxyaalood isla waqti isku mid ah mahadnaqa noocaan cusub, 7.0.
Microsoft wuxuu sii wadaa inuu qirto dareenka weyn ee Android iyo iOS iyada oo la bilaabay barnaamijyo cusub iyo cusbooneysiin taxane ah oo ku saabsan riwaayadaha wanaagsan ee barnaamijyada ay ku leedahay labadan nidaam. Kama ka cabaneyno arrintaas, laakiin waxaan ku raaxeysaneynaa liis-garayn wanaagsan oo softiweer ah oo ka timid Redmond.
Marka ilaa shalay waxaad arki kartaa cusbooneysiinta cusub ee Skype ee Android taas wuxuu kaa dhigayaa wejiga hortiisa taas oo ka faa'iideysaneysa baaxadda weyn ee shaashadda kiniinka ah. Waa kooxda Skype lafteeda oo ku faanaysa qaabkan cusub ee sheegaya in aad aaladdaada jeedin karto oo aad farriimo diri karto, feylal aadna hubin karto farriimaha ugu dambeeyay ee aad ka heysato dadka aad la xiriirto.
Marka laga reebo horumarintan UI, laba astaamood oo cusub ayaa lagu daray. Mid waa raadinta guud ee xiriirada, sheekaysiga, kooxaha iyo bots Skype, halka tan labaadna tahay in si otomaatig ah loogu daro kaararka xiriirka isticmaalaha liiskooda. Waa waddo kuwa aan horay u isticmaalin Skype, ay ugu fududaanayso inay ku biiraan adeegga.
Una cusbooneysiin cusub taasi waxay ka timaadaa bots bishii Maarso ee sanadkii hore.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Skype 7.0 wuxuu kudarsamayaa kumbuyuutar iskuxir cusub oo farabadan
QAADASHO waa madal gaar ah oo ay ka buuxaan midab iyo tacaburro
CastBox, waa barnaamij aadan ka maarmi karin haddii aad leedahay Google's Chromecast